Global Voices teny Malagasy » Drafitr’i Hong Kong Mba Hamongorana Tsikelikely Ny Varotra Vangin’elefanta Amin’ny Tsena Anatiny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Febroary 2016 13:03 GMT 1	 · Mpanoratra Expat Writer Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Andro iray nialoha ny fanambaràna ny politikan'ny governemantan'i Hong Kong, nanangona sonia niisa 66.159 sy nampiseho izany tamin'ny filoha mpanatanteraka ireo vondrona mpiaro ny fiainan'ireo bibidia any amin'ny toerany natoraly, nangataka ny fandraràna ny varotra vqngin'elefanta ao amin'ny tsena anatiny. Sary: WildAid HK / Twitter
Nanambara ny drafitra hametrahana fandraràna ny fanafàrana sy fanondrànana ny vokatry ny haza elefanta ireo manampahefana an'i Hong Kong, manafoana tsikelikely tanteraka ny varotra vangin'elefanta amin'ny tsena anatiny.
Ny taona 1990, taorian'ny fandraràna iraisampirenena ny varotra vangin'elefanta, nandrara ny fividianana sy famarotana avy any ivelany ny vangin'elefanta i Hong Kong, na mbola nanohy namela ny varotra nahazoana alàlana amin'ireo vokatra azo avy amin'ny vangin'elefanta ao amin'ny tsena anatina aza. Ny taona 2014, mbola nisy tsena sy toeran'ny mpanao asa tànana nanana fahazoandàlana niisa 447 nikirakira ny vangin'elefanta ihany.
Ho fanampin'ny varotra anatiny ara-dalàna, misy tsena maizina lehibe tsy ara-dalàna momba ny vangin'elefanta. Ny taona 2013 monja izao, nahatratra sy nitazona 8.041 kilao (maherin'ny 17.700 pounds) anà vangin'elefanta nampidirina an-tsokosoko nalefa tany Hong Kong ny sampandraharahan'ny fadintseranana. Araka ny antontan-taratasin'ny Filankevitry ny Lalàna, eo amin'ny 60 isanjaton'ny vangin'elefanta tsy ara-dalàna  ampidirina an-tsokosoko any Hong Kong no mifarana any amin'ny taniben'i Shina. Ny sasany amin'ny vangin'elefanta tsy ara-dalàna ihany koa mandeha any amin'ny tsena antsinjarany ao anatiny, izay misy mpanjifa maro ho an'ireo vokatra lafo vidy ho an'ireo mpizahatany any amin'ny tanibe.
Taorian'ny fanambaran'i Shina hoe hanao fibahanana tanteraka ny vangin'elefanta  izy, nampiditra drafitra hampandehanana haingana ny lalàna mandrara ny fanafarana sy fanondranana avy any ivelany ny vokatra azo amin'ny fihazana elefanta ny Filoha Mpanatanterak'i Hong Kong, Leung. Nilaza ihany koa izy fa hokarohan'ny fanjakana amin'ny fomba mavitrika ireo fepetra hafa entina hanafoana miandàlana ny varotra vangin'elefanta ao anatiny.
Iaraha-mahalàla ny toeran'i Hong Kong hoe tsena lehibe indrindra manerantany amin'ny varotra vangin'elefanta, ary ny sehatra ivezivezen'ny varotra tsy ara-dalàna amin'ny vangin'elefanta ao amin'ny taniben'i Shina, maro ireo vondrona mpiaro ny zavaboahary tsy ompiana, miantso ilay fampanantenana vaovao nataon'ny governemanta ho toy ny savalàlana. Iray amin'ireo fikambanana ireo izay tena naneho ny feony ny WildAid tamin'ny fiezahana hamadihana ilay fandraràna ny varotra vangin'elefanta ho lasa tena misy any Hong Kong. Mankalaza ilay vaovao izy:
Vaovao tena tsara an'i Hong Kong androany! Maro ny asa hatao fa misy ireo zavatra mahabe fanantenana amin'ny ho avy, avy amin'ny @wildaidHK
Marina tokoa, betsaka tokoa ireo asa hatao miandry ny governemanta mba hiarovana ireo elefanta. Voalohany, tsy moramora akory ny fanoheran'ireo mpikirakira vangin'elefanta nahazo alàlana, ary mbola misy ihany koa ny tahotra hoe mety ho tara loatra ho an'ireo elefanta, mandrapahitàna fepetra mivaingana hampiharina, .
Amin'ny maha-mpitia biby azy, maneho hevitra i Kaz:
Ho foana ihany io aferan-dry zalahy io NA HO INONA NA HO INONA ato anatin'ny taona vitsy satria tsy hisy vangin'elefanta intsony, noho ny tsy fisian'ny elefanta intsony….
Nasehon’ ny fanadihadiana navoaka ny taona 2014, fa namono elefanta Afrikana 100.000 isa ireo mpihaza biby tsy ara-dalàna, tao anatin'ny telo taona monja (tao anelanelan'ny 2011 sy 2014).
Faharoa, ahitàna tsy fahabangàna maro ireo lalàna misy ao Hong Kong amin'izao fotoana izao, izay manohana ny satan'ilay tanàna ho toerana lehibe indrindra amin'ny varotra vangin'elefanta eto an-tany. Ny tena marina, tafiditra amin'ny varotra an-tsokosoko tsy ara-dalàna ireo fivarotana maro manana fahazoandàlana, araka ny tatitra miafina navoakan'ny WildAid telo volana lasa:
Lahatsary Nafenina Mampibaribary ny Tsy Mety Tamin'ny Seraseranà Vangin'elefanta  avy tamin'ny WildAid  amin'ny Vimeo .
Milaza ilay mpivarotra an-tsokosoko ao anatin'ny lahatsary fa tsy mahalala ny fomba hamefena ny varotra vangin'elefanta mihitsy ireo tomponandraiki-panjakana, ary tsy manaraka ny làlana izay mitondra mankany amin'ny toerana fanangonana ireo vangin'elefanta izy ireo.
Ny taona 2014, nahatratra 2.100 dolara Amerikana isaky ny kilao eo ho eo no vidin'ny vangin'elefanta tsy mbola nasiam-panodinana any Shina  amin'ny ambongadiny, ary ny volana Novambra 2015 vao nidina 1.100 dolara Amerikana. Mahatonga ny tsena maizin'ny vangin'elefanta ho indostria ambanin'ny tany mitentina dolara an-tapitrisany maro ireo tarehimarika ireo.
Ny taona 1990, 474 taonina ny lanjan'ny tahirinà vangin'elefanta voarakitra tany Hong Kong. Ny taona 2000, nolazaina ho 261 taonina indray io. Na izany aza, hatramin'izay, nihisatra ny fihenan'ny tahirinà vangin'elefanta teo an-toerana, ary ny taona 2008 mbola nisy 232 taonina ny vangin'elefanta voarakitra tao an-toerana.
Araka ireo tatitry ny media, tsy mbola nametraka  fanamarinana isan-taona mikasika ny habetsahan'ny tahirinà vangin'elefanta voarakitra any an-tànan'ireo mpivarotra mahazo alàlana mihitsy ireo manampahefanan'i Hong Kong, na nanamarina sy nanaramaso ireo boky firaiketan'izy ireo ny varotra natao. Izany no mahatonga ny vangin'elefanta tsy ara-dalàna miditra antsokosoko mahita ny làlany mora foana eny amin'ny tahalan'ny fivarotana.
Hatramin'izao aloha, tsy mbola nametraka fandaharam-potoana matotra amin'ny fandraràna ny varotra anatiny ihany ny governemantan'i Hong Kong, miezaka ny hanintona ny saina ho any amin'ny politika ireo vondrona miaro ny fiainana tsy mbola voatohintohina, amin'ny fanantenana ny hanao io ho sarotra avadika kokoa amin'ny hoavy:
Tsara ho anay! Maro ireo olona hahafantatra fa handràra ny varotra #vangin'elefanta i HK. Rehefa betsaka ny olona mahafantatra, kely ny risika hoe hiverina ilàlana ianareo!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/17/78816/
 60 isanjaton'ny vangin'elefanta tsy ara-dalàna: http://sanpoyan.journalism.hkbu.edu.hk/wp-content/uploads/2015/04/elephant3.jpg
 hanao fibahanana tanteraka ny vangin'elefanta: https://www.worldwildlife.org/press-releases/u-s-and-china-commit-to-enact-near-complete-ivory-trade-bans
 Lahatsary Nafenina Mampibaribary ny Tsy Mety Tamin'ny Seraseranà Vangin'elefanta : https://vimeo.com/143404880
 no vidin'ny vangin'elefanta tsy mbola nasiam-panodinana any Shina: http://savetheelephants.org/about-ste/press-media/?detail=sharp-fall-in-the-prices-of-elephant-tusks-in-china
 tsy mbola nametraka: http://news.mingpao.com/pns/%E7%92%B0%E5%9C%98%E6%94%BE%E8%9B%87%E6%8F%AD%E8%B5%B0%E7%A7%81%E7%8C%96%E7%8D%97%20%E6%BC%81%E7%BD%B2%E8%AA%8D%E7%9B%A3%E7%AE%A1%E6%9C%89%E6%BC%8F%E6%B4%9E%20%20%E8%B1%A1%E7%89%99%E5%95%86%EF%B9%95%E9%9A%A8%E6%99%82%E5%8F%AF%E8%B3%BC10%E5%99%B8/web_tc/article/20150905/s00002/1441387772296